Gaari lagu qarxin rabey mid ka mid ah Hoteelada Muqdisho oo la qabtey. | Baydhabo Online
Gaari lagu qarxin rabey mid ka mid ah Hoteelada Muqdisho oo la qabtey.
Warar goor dhow la helay ayaa sheegaya in Gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa la qabtey, dowlada federaalkana ay warbixin hordhac ah ay ka soo saartey.
Gaarigani ayaa la sheegay in la qorsheynayay in lagu weeraro mid ka mid ah hoteelada Magaalada Muqdisho, inkastoo aan si rasmi ah loo sheegay magaca hoteelkaasi iyo halka uu ku yaalo.
Gaarigan oo ahaa nooca SPACIO ayaa lagu qabtay, xaafada Banaadir gaar ahaan albaabka Hotelka Royal ee magaalada Muqdisho oo ku yaalla, degmada Hodon ee Gobolka Banaadir.
Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Afhayeenka C/faraax Cumar Xalane ayaa sheegay in gaariga ay saarnaayeen laba qori AK 47 ah, waxyaabo qarxa oo kiimiko ah, wuxuuna intaasi ku daray in ujeedku ahaa in lagu qarxiyo hotelka.
Gaariga ayaa lagu wareejiyay hay’adda Nabadsugidda ee NISA, iyadoo aan la sheegin cid loo qabtay oo la socotay gaarigaasi. Afhayeenka ayaa ku eedeeyay inay qaraxyadaasi soo abaabuleen kooxda Alshabaab oo uu sheegay in ay caado ka dhigteen in shacabka bar tilmaameedsadaan, isla markaasiana ay dhibaateeyaan.
Dhinaca kale Afhayeenka Wasaaradda Amniga dowladda Soomaaliya C/kaamil Macalin Shukri oo sheegay inay gacanta ku dhigeen laba nin oo gaariga la qabtay waday, halka afhayeenka Gobolka aanu sheegin cid loo qabtay.
Dhowaanahan waxaa ciidamada dowladda ay gacanta ku dhigayeen gawaari la sheegay in ay qaraxyo fulin rabeen, iyadoo inta badan aan la helin raggii howshaasi ku dhex jiray.
Dhowaan ayay ahady markii Ciidamada Nisa ay qabteen gaari la sheegay in uu qarax la maaganaa mid ka mid ah Hoteelada Muqdisho iyo gaari kale oo la sheegay in marka weerarka uu dhaco loogu talo galay in ay weerar toos ah qaadaan, inkastoo mid ka mid ah gawaaridaasi uu qarxey intii fashilinta lagu hayay.
Horey ayaa weeraro loogu qaadey hoteelo ku yaala magaalada Muqdisho, sidoo kalena maqaayado ayaa dhowr jeer lala beegsadey qaraxyo, lamana oga weli sababta ka dambeysay weeraradani.
Ma jirto ilaa iyo Hadda cid sheegatay gaarigani la qabtey oo loogama baran in la sheegto weerarada fashilma. Hase yeeshee weerarada tooska ah ee dhaca ayaa siyaaabooyin kala duwan loo sheegtaa.